About Us - Qingdao Aedis Fabric mutsinga dzinofamba nemukaka Co., Ltd
Aedis Fabric mutsinga dzinofamba nemukaka mazano uye anotengesa Whitehead Textile kufefetedza gadziriro (more soMunyengetero Fabric ducts / mutsinga dzinofamba nemukaka masokisi / sox) kuti ubate isina mhepo kuparadzirwa munzvimbo marudzi ose dzimba uye mafomu.
Aedis Fabric mutsinga dzinofamba nemukaka aiva mumwe wokutanga jira mutsinga dzinofamba nemukaka vagadziri hwakagadzwa muna 2003 uye kubvira ipapo yakura kupfuura jira mutsinga dzinofamba nemukaka mugadziri mu China.
Aedis Fabric mutsinga dzinofamba nemukaka iri muna Qingdao, China uye vakagadzirira pamwe yemhando kukarukureta Software kugonesa mainjiniya ayo ruzivo kuti vatevedzere kugadzirisa uye kupa yakanakisisa hwokugadzira rutsigiro chinokosha mutsinga dzinofamba nemukaka indasitiri. Hofisi iyi yakavambwa muna 2003 uye kubvira ipapo yakabudirira yave kuwedzera nhau yayo yose China, uye kubvira 2012, tatanga kuita Export yedu jira mhepo mutsinga dzinofamba nemukaka munyika yose kuburikidza vamwe HVAC Manufacturers 'Representatives.
Tinoshandisa proprietary 3d Software kugadzira yenyu mhepo kupararira hurongwa. Pasinei akagadzira kunzwisisa kwedu pezvakaitwa unhu nechokwadi hurukuro pamusoro chipfuro uye nenguva. Technical kuchinja wegadziriro pamwe zvezvakatipoteredza zvinhu uye upfumi zvakanaka inongova mimwe zvikonzero zvedu mhepo akapararira hurongwa awana kukurumbira pamwe ezvivako, Developers uye Contractors yose, uyo kazhinji exchange kwakajairika simbi ducting kupinda jira enyika. Chinhu chinogona kuitwa pane simbi zvinogona kuitwa jira.
Fabric mhepo akapararira ndiko kutsanya kukura chidimbu. The lightweight nature FabricAir kuti maitiro anoita kuti yakanaka inoverengeka mafomu incl. pfupi zvivako, kufanana mumatende uye kuratidzwa dzimba, uye retrofitting zvivako aripo. Anti-kungatikanganisa unhu kuti pane bhizimisi raiva nepurofiti yakakurumbira zvemitambo nhandare, natatoriums, maindasitiri dzekubikira uye kwete kutonhora uye kuoma nechando mafomu muduku, apo kwakajairika simbi ducting ane zvinokosha pezvatinokanganisa. The Utsanana zvivako uye Anti-microbial chisarudzo inoita vachipfuma zvokudya kubudiswa, zvokudya okuchengetera uye zvokurapa mafomu. Uye nyaradzo wakasika parutivi bespoke chokubuda mienzaniso kuti indoor okunze kupfuura kwakajairika simbi nehurongwa.
Kushandisa jira ducting zvinoreva kusika munhu mhepo akapararira hurongwa chero pamakona, chero urefu uye chero diameters vaida. Hapana zvausingakwanisi kana totaura emaoko, reducers uye tora-offs. Zvimwe zvaungada kuita simbi ducting zvinogona kuitwa machira, uye ipapo vamwe. Sezvo jira ducting hakusi kungatikanganisa, pane vakawanda mafomu apo jira mhepo akapararira hurongwa vakuru kwakajairika simbi ducting. Fabric ducts zvisinganyanyi ruzha, condensation vakasununguka uye uremu chete chikamu nesimbi ducting.
Mutsinga dzinofamba nemukaka mavara zvinogona wakanyatsokodzera yomukatikati magadzirirwo zano uye zvinokwanisika kudhinda Logos uye zvakawanda pamusoro hukawanika. Ducts anogona kunyange kukumikidzwa uchinyanya unhani semuenzaniso mafuta dzinga, Anti-microbial kurapwa, Anti-kunofambira mberi kurapwa uye zvichingodaro. Dzidza zvakawanda pamusoro yedu-chinja maitiro magadzirirwo.
Chimwe chakanakira rejira enyika pamusoro simbi ducting yakakwirira pamwero aivamo kunyaradzwa ventilated dzinodengenyeka. Kushandisa jira anobvumira injiniya kusika yakanaka chokubuda muenzaniso pamamiriro nzvimbo pasina gwaro, hapana condensation, hapana ruzha uye hapana zvikamu akafa. Zvakaitika zvinoratidza kuti kushandisa FabricAir akapararira enyika pachando basa runyararo ane wakawedzera vabatsirwe mazuva vasingasviki kurwara pakati vashandi, uye Anti-kungatikanganisa uye Utsanana yezvakaita ducting hurongwa inoita vachipfuma chando uye nechando zvivako akadai nyama kugadzira miti.
Fabric mhepo akapararira hurongwa vari aizivikanwawo Whitehead Textile kufefetedza mugadziriro, jira ducts, mutsinga dzinofamba nemukaka masokisi, kana sox, uye vane mukurumbira wavo mukana wokushandiswa uye chinoumba zvakanakira zvakafanana gwaro isina, condensation-akasununguka, noiseless, ngura isina uye Utsanana. FabricAir akapararira hurongwa akafukidza zvakawanda mafomu incl. zvokudya, mutambo, Industrial, Retail uye nzvimbo dzevoruzhinji, dzidzo, mahofisi uye kunyaradzwa zvarwo, uye zvokurapa indasitiri. Dzidza zvakawanda pamusoro mafomu.